Ku saabsan bogga internetkaActuellement sélectionné
Bogaga warbixinta ee iswiidhan waxaa lagu akhrin karaa khidmada kor u akhriska, Talande Webb. Waxaad u baahan tahay inaad ku darto Bogga Hadalka ka calaamad ahaan akhriyaha boggaada, sidaan ayey noqoneysa marka:
1. Guji lifaaqa Talande Webb ee hoose (qeyb cusub ama daaqad cusub ayaa furmeysa).
2. Dhinaca ee bogga aad imaaneyso waxaad ka heleysaa "Så funkar Talande Webb", guji "spara bokmärke".
3. Midigta guji ee lifaaqa "Aktiverar Talande Webb" iyo guji "Lägg till i Favoriter…".
Akhriyaha qaarkood waxaad jiideysa bedelka lifaaqa ee bookmärkiga.
4. Aad bogga warbixinta iswiidhan ka dibna guji lifaaqa ee bokmäskesfältet. Hadda waxaad ku arkeysaa majaalka qalabka ee boggaada.
Fiiro gaar ah haddii aad doorato qaabkan inaad u isticmaasho Talande Webb waxaad u baahn tahay inaad kiciso qalabka caawinaada ee bog cusub oo kasta oo aad u tageyso.
Sawirada uusan ku qorneen magaca sawir-qaadaha waxa laga soo iibiyay shirkada Colourbox, bangiga sawirada (www.colourbox.com).
Booggan waxa ku jiro kan loogu magacaabo kookiis[cookies]. Cookie waa qoral yar oo warbixin ah oo booggan ku keeydinaayo adiga kombiyuutarkaada.
25 julay 2003 baa waxa ansaxmay sharci cusub oo la dhaho wada xiriirida habka elektaroniga. Sharcigaas wuxu dhigaayaa in bulshada boogga soo gasho la ogeysiiyo in boogga isticmaalaayo kookiiska[cookies]. Qofka boogga isticmaalaayo waa in xitaa la siiyaa fursada uu ku xajirilahaa kookiiska.
Qofka aan rabin kookiis wuxu ka dalbankara in borograamka akhriya bogga internetka oo kombiyuutirkiisa uusan oggolaan kookiis. Hadii aad sidaas suubisid adiga ma isticmaalikartid qeybtaha dhammaan sidii loogu talagalay booggaan.
Arrinta kookiiska ka sii akhriso bogga interneka oo guddiga bostada iyo telefoonada.